VA - City FM 12th Anniversary [ကမ္ဘာတည်သရွေ့] 2014 Album 320 Kpbs ! - Mg Shan Lay
Home ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း 320 Kbps! Album High Quality Jouk Jack Lလွန်းဝါ Rဇာနည် Various Artists ခင်စုစုနိုင် ချမ်းချမ်း ဂျက်ဆန်ထွန်း ထက်နေကြည် နီနီခင်ဇော် ဗန်းသောဒ့်ကျင်း မိစန္ဒီ မို့မို့လွင် ဖြူဖြူကျော်သိန်း အိမ့်ချစ် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ကျော်သီဟ VA - City FM 12th Anniversary [ကမ္ဘာတည်သရွေ့] 2014 Album 320 Kpbs !
VA - City FM 12th Anniversary [ကမ္ဘာတည်သရွေ့] 2014 Album 320 Kpbs !
10:16:00 AM ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 320 Kbps!, Album, High Quality, Jouk Jack, Lလွန်းဝါ, Rဇာနည်, Various Artists, ခင်စုစုနိုင်, ချမ်းချမ်း, ဂျက်ဆန်ထွန်း, ထက်နေကြည်, နီနီခင်ဇော်, ဗန်းသောဒ့်ကျင်း, မိစန္ဒီ, မို့မို့လွင်, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, အိမ့်ချစ်, အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်, ကျော်သီဟ,
1. ကမ္ဘာတည်သရွေ့ - ကျော်သီဟ၊ ခင်စုစုနိုင်၊ မို့မို့လွင်
2. အချစ်ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
3. မမျှော်လင့်ဘဲ - ဖြူဖြူကျော်သိန်း
4. ဇွတ်ချစ်မယ် ဘယ်နေ့လဲ - ဂျက်ဆန်ထွန်း
5. ကမ္ဘာတစ်ဖက်ဆီသို့ - မိစန္ဒီ
6. အရိပ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခြင်း - နီနီခင်ဇော်
7. ဘယ်လောက်ဝေးဝေး - Rဇာနည်
8. နေရာချင်းသာလဲလိုက်ချင်တယ် - အိမ့်ချစ် ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်
9. ညှို့ယူဖမ်းစား နှလုံးသားသံစဉ် - ချမ်းချမ်း
10. ကာရန်မညီသော - Lလွန်းဝါ ၊ ဗန်းသော့ဒ်ကျင်း
11. နိုင်ငံတကာ ရင်သွေးငယ်များ - ထက်နေကြည်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ၊ ထက်အောင်၊ နန်းထက်ထက်သူ၊ ၀ိုင်းလေး
Tags # ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း # 320 Kbps! # Album # High Quality # Jouk Jack # Lလွန်းဝါ # Rဇာနည် # Various Artists # ခင်စုစုနိုင် # ချမ်းချမ်း # ဂျက်ဆန်ထွန်း # ထက်နေကြည် # နီနီခင်ဇော် # ဗန်းသောဒ့်ကျင်း # မိစန္ဒီ # မို့မို့လွင် # ဖြူဖြူကျော်သိန်း # အိမ့်ချစ် # အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် # ကျော်သီဟ
Labels: ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 320 Kbps!, Album, High Quality, Jouk Jack, Lလွန်းဝါ, Rဇာနည်, Various Artists, ခင်စုစုနိုင်, ချမ်းချမ်း, ဂျက်ဆန်ထွန်း, ထက်နေကြည်, နီနီခင်ဇော်, ဗန်းသောဒ့်ကျင်း, မိစန္ဒီ, မို့မို့လွင်, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, အိမ့်ချစ်, အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်, ကျော်သီဟ